Kooxda Barcelona oo heshiis la gaartay da’yar reer Brazil ah… (Booskee ka ciyaaraa?) – Gool FM
(Barcelona) 26 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis la gaartay daafaca da’da yar ee kooxda Coritiba ee Yan Couto si uu xagaagan ugu soo biiro.
Laacibkan ayaa la rumeysan yahay inuu diiradda u saarnaa kooxo badan oo Yurub ah, iyadoo Arsenal iyo Bayer Leverkusen labadoodaba dhawaan ay soo bandhigeen xiisohooda ku aaddan xiddiga reer Brazil, kaasi oo ay da’diisu ka yar tahay 17 sano.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Globoesporte, Kooxda haysata horyaalka Spain ayaa soo gabagabaysay heshiis daafacan dambeedka midig, kaasoo imaan doona Camp Nou marka uu 18 jirsado 3-da bisha June ee sanadkan.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxda ka dhisan Gobolka Catalan ay bixin doonto lacag dhan 4.6 milyan oo gini ah marka hore, inkastoo lacagta ay ku soo iibsanayso la rajaynayo inay intaasi ka sii badan karto.
Couto ayaan wali ciyaarin kulankiisii ​​ugu horreyay kooxda waa weyn ee Coritiba, laakiin waxa uu si wacan ugu riyaaqay kooxda da’yarta ee xiddigaha da’doodu ka hoosayso 20-jirada, waxaana la filayaa inuu waqti qurux abdan la qadan Barcelona marka loo eego tayo ahaan iyo da’ ahaanba.
Barca ayay soo gaartay guuldarradoodii afaraad ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan 2019-20 xalay, iyadoo kooxda Valencia ay 2-0 uga badisay ciyaar ka dhacday garoonka Mestalla.